I-15 Best Final Cut Pro Windows Alternatives (2020) - Ama-Softwares
Uma kukhulunywa ngokuhlelwa kwevidiyo, njengokuhlela kwangempela kokwenza amavidiyo abukekayo. Amavidiyo anamandla okushintsha indlela yokucabanga nokuthi ngamehlo anjani abukeka emuhle ngempela. Ubuchwepheshe banamuhla obunqamulelayo abuvumeli kuphela ukuthwebula umzuzu omuhle kepha futhi kubenza bajabulise futhi bahlanganyele. IFinal Cut Pro ingenye ye-acme yokuthuthuka kwezobuchwepheshe kwanamuhla.
I-Final Cut Pro - Imininingwane emfushane
Le software yokuhlela isithombe inakho konke isihleli sobungcweti nokungaphezu kwalokho okucelwa ngumsebenzisi wansuku zonke. Isetshenziswa kabanzi futhi iyathandwa ngenxa yezici zayo zokusebenzisa ezisheshayo nezilula. Lezi zici zingasiza ukudala amavidiyo apheleliswe emininingwaneni emihle kakhulu futhi afanele isikhathi sabantu. Kanye neVidiyo, ungaphinda uthuthukise umsindo ngokunciphisa izindleko nokuchitha isikhathi. Kusetshenziswa le ndawo ukwenza ukuhlela amavidiyo ngokuphelele kusakazeke izigidi zabalandeli.
Isidingo Sezinye izindlela:
Yize iphelele ekulethweni komphumela, ukusebenzisa i-Final Cut Pro kunesabelo sayo sokungahleleki. Okokuqala, inani elilinganiselwe lamadivayisi ahambisanayo. I-Final Cut Pro itholakala kuphela kwi-Mac OS evumelekile ukuthi inikezwe izidingo zayo ezinamandla ngokuhlela okunamandla. Noma kunjalo kunabasebenzisi abaningi bewindows kune-Mac futhi hhayi bonke abakwazi ukukhokhela ama-Mac Devices.
Ukungabi namandla kuyisici esisekela isidingo senketho ye-Final Cut Pro. Isoftware iyakhokhwa futhi kufanele ukhokhe ama-377.88 $ futhi aphume kwisabelomali sabaculi abaningi bokuhlela abasafufusa. Yize kubhekwa njengokutshalwa kwemali okukodwa kungahle kubonakale kufanelekile, njengoba kuvuselelwa mahhala. Kepha leli banga lentengo belingakhulumi kubasebenzisi abasha nabakhi bamavidiyo abakhulayo. Izindleko ziphakeme kakhulu ukuthi ungathenga i-DSLR ngale mali engaka!
Ufuna ukusebenzisa iMovie ku-Windows? Hlola Izindlela ezihamba phambili ze-iMovie zeWindows 10 kusuka esigabeni sethu sebhulogi.
Final Cut Pro Windows Alternatives - Ubuhle nobubi
Ukuqala ngesidingo esibaluleke kunazo zonke esigcwaliswa yiFinal Cut Pro ukuthi lokhu kuyatholakala ngamawindi. Njengoba kunikezwe inani elikhulu labasebenzisi bewindows, lokhu ngokuqinisekile kufanelekile. Enye isoftware ishibhile kuneFinal Cut Pro enomehluko omncane noma ongekho nhlobo kuzici. Isoftware nayo ayifuni kakhulu i-hardware futhi inezinzuzo zayo zamawindi. Njengalezi zisebenziseka kalula kunezika-Mac.
Uma umusha ku ukuhlela ividiyo futhi ifuna isoftware ukuqala ngamawindi akho, noma uyiNgcweti. Le software engu-15 inakho konke ongakudinga ngenkathi ukhuthaza ubuhlakani bakho. Konke okungcono nokulinganisela ngokuqhathanisa ne-Final Cut Pro. Ngaphandle kwanoma yikuphi ukuvumelana kokukhipha kokudala, zama lezi ezinye izindlela ze-Final Cut Pro.
1. I-Adobe Premiere Pro CC
Ayikho enye indlela engcono yokugcina i-Final Cut Pro kunale software yokuhlela ividiyo eyenziwe yi-Adobe. Indawo yokuhlala ibingakaze ilandelwe emkhakheni wokuhlela izithombe selokhu yaqala ukwethulwa. Isoftware yokuhlela ividiyo i-Adobe Premiere Pro yathuthukiswa isuka ku-Adobe Premiere eyethulwe ngo-1991. Yenzelwe ukusetshenziswa kochwepheshe kuphela, kanti enye inguqulo yale software 'i-Adobe Premiere Elements' ingeyokusetshenziswa komuntu uqobo.
Isoftware isetshenziswa yi-CNN ne-BBC. Ama-movie adumile afana ne-Deadpool, i-Gone Girl, ne-terminator dark adalwa kusetshenziswa i-Adobe Premiere Pro. Ungahlela amavidiyo anokulungiswa okuphezulu kuze kufike ku-10,240 x 8,192 resolution kuzo zombili i-RGB ne-YUV. Ivumela ukuhlelwa kwe-3D, ukuhlelwa komsindo, nokuxhaswa kwe-plug-in kwe-VSR. Konke ukuhlela okuyisisekelo kwe-Broadcast-level nokuhlela ividiyo okudingekayo kungenziwa kule software.
Enye indlela edumile ye-Final Cut Pro, ku-Adobe Premiere Pro, ingangenisa ividiyo, umsindo nezithombe. Ungathumela amavidiyo ngaphandle kokuyekethisa ukuxazulula ifomethi ekulungele ukusatshalaliswa. Faka imiphumela kuvidiyo, sebenzisa iziqeshana nezithombe, uzihlanganise, nezihloko ngenkathi uhlela izinhlelo zokusebenza kusoftware. Ixhasa inani elikhulu lamafomethi wevidiyo nezinhlelo zokusebenza ezihlanganisiwe.
Ukulungiswa kwevidiyo yekhwalithi ye-Premium
Inani elikhulu lamafomethi wefayela asekelwayo
Ayikho inguqulo yamahhala, etholakala kuphela ngesivivinyo samahhala
Imfuneko eyengeziwe yehadiwe
IPremiere Pro Single App ngo- Single 1,675.60 / ngenyanga
Ibhizinisi ku₹ 2,300.00 / ngenyanga
2.Corel VideoStudio Ultimate
Uma wazi ngezinhlelo zokusebenza ezidwetshiwe zehluzo lapho-ke kufanele ube nobunzima ngeCorel. Uma kukhona umuntu ancintisana naye ngokuhlela isithombe se-Adobe, ngokuqinisekile kunguCorel. Yenziwe ngo-1985 le nkampani yethule iCorelDraw isoftware yokuqamba imidwebo eyaduma kakhulu kangangoba ayikaphikiswa. Njengoba i-aced inkambu yemidwebo uCorel wethule iCorel VideoStudio ukuthi nayo ilawule ukuhlelwa kwevidiyo!
Ngokuya ngekhwalithi yevidiyo nokuCubungula, le ndlela yeFinal Cut Pro yethembeke kabanzi. Ngokuqhathanisa ne-Final Cut Pro, le software inakho konke ukuqhudelana nayo futhi ingeziwe kokugqamile njengomhleli wevidiyo. Ungasebenzisa imiphumela ye-premium nokuhlelwa kokulungiswa okuphezulu kwevidiyo kusuka ku-720p kuye ku-2610p ngamathuluzi wokuhlela ahlukile.
Inezihlungi ezingaphezu kuka-2,000 +, ezanele umsebenzisi wamavidiyo wakho alandelayo ayi-10,000 +. Ibuye ibe nezihlungi ezenziwe ngokwezifiso, ukufakwa kombala, nezinguquko. Ibuye ibe nesirekhoda sesikrini ongasisebenzisa kanye nesici sokurekhoda se-webcam. Ibuye ibe neNewBlueFX, iBoris FX, neProDAD. Sebenzisa iCorel VideoStudio Ultimate ukwenza amavidiyo wokudala futhi ahlelwe ngokufanele.
Izihlungi ezingama-2000 + namathuluzi wokuhlela amaningi
Ukuhlelwa kwevidiyo okunokucaca okuphezulu
Ithembekile futhi isetshenziswa ngochwepheshe
Ayikho inguqulo yamahhala etholakalayo
I-Full version ngasikhathi sinye ngo-₹5,890
Thuthukisa kusuka enguqulweni endala ku-₹4.714
Uhlobo lwesivivinyo samahhala luyatholakala izinsuku ezingama-30
Le software ithandwa futhi isetshenziswa kabanzi embonini yamafilimu. Ikhishwe ngo-1989 ngeMacintosh, ngokuthuthuka okuthe xaxa izinhlobo zayo ezintsha nazo zikhishelwa amawindi. Ngokuqhathanisa ne-Final Cut Pro, le software inikeza cishe ikhwalithi efanayo nezici njenge-Windows. Isoftware ine-design enembile ne-interface yomsebenzisi elula. Isoftware inezinguqulo ezi-4 futhi ingasetshenziswa njenge-software ezimele yodwa.
Le ndlela ye-Final Cut Pro isebenza ngesikhathi ngezici zayo ezihlukile kanye ne-interface eyakheke kahle, eyenziwe yaphela ngokuhamba kwesikhathi. Isoftware ingasetshenziselwa ukusetshenziswa komuntu siqu kanye nokuchwepheshe. Igcwele amathuluzi amaningi, ukulungiswa kombala okungcono, ne-VFX. Ungahlela futhi umsindo ukufanisa ikhwalithi yevidiyo futhi ungavumeli umsindo ukhawulele ubuhlakani bakho.
Izinhlobo ezine ezitholakalayo yiMedia Composer First, Media Composer, Media Composer Ultimate, neMedia Composer Enterprise. Uhlobo ngalunye lunokuhlukahluka, futhi lungcono kunangaphambilini. Uhlobo lokuqala Umqambi wemidiya wokuqala ungcono kakhulu kubaculi abasha ekuhlelweni kwevidiyo njengoba kumahhala futhi Inikeza izidingo eziyisisekelo zokuhlela ividiyo. Okulandelayo kukhona okukhokhelwayo futhi kuyatholakala ngesivivinyo samahhala sezinsuku ezingama-30.
Inguqulo yamahhala iyatholakala
Inguqulo ekhokhelwayo enesilingo samahhala esitholakalayo
Idizayini elula nokwabelana okulula, ukungenisa nokuthekelisa
Intengo ephezulu yezinguqulo ezikhokhelwayo
Umqambi wemidiya ngo- 499.99 $ / ngonyaka
Ekugcineni ku-49.99 $ / Inyanga
Ibhizinisi ngentengo eguquguqukayo
Le yindlela engcono kakhulu ye-Final Cut Pro yamawindi futhi iyatholakala esitolo seMicrosoft. Ungenza amavidiyo usebenzisa izithombe, iziqeshana, nomculo kule software. Le software yokuhlela ividiyo ithandwa kakhulu phakathi kwabasebenzisi bewindi ngenxa yamawindows interface-interface.
Imisebenzi efana nokujoyina ividiyo, umculo wangemuva, namazwibela wombhalo kungenziwa ukukhulisa amavidiyo akho kule software. Izici ezifana nesihlungi sesithombe, ukuthengiselana, nemiphumela yokusondeza kungangezwa nayo. Ukucubungula kuyashesha futhi kugcina ukuhlela ividiyo okuzinzile nokucacile. Ungangeza umculo kusuka kumathrekhi akhelwe ngaphakathi noma ungenise ifayela lakho.
Okuncanyelwa ukuthi kusetshenziselwe izinhloso zomuntu siqu, inezinguqulo ezimbili. I-Moviemaker 10 inguqulo yamahhala futhi Inikeza zonke izici zokuhlela ividiyo ezidingekayo. Ngenkathi i-Moviemaker Pro iqinisekile ngokuhlukile kwe-Final Cut Pro ekusetshenzisweni kobuchwepheshe. Uhlobo lwePro luyakhokhelwa futhi luvumela ukufinyelela kuzici ezengeziwe nokuhlelwa kwevidiyo esezingeni elingcono. Kumculi ohlela ukuhlela ividiyo, lolu hlelo lokusebenza lungaba yindawo yokuqala ephelele.
Inguqulo yamahhala yamawindi
Izici eziyisisekelo kunguqulo yamahhala
Isitebele, esheshayo, futhi esebenza kahle
Isici esilinganiselwe kunguqulo yamahhala
Akunconyelwe ukusetshenziswa kobuchwepheshe
Intengo yokuthenga yesikhathi esisodwa engu-8.99 $
Lokhu okunye kwe-Final Cut Pro Kunikeza okungaphezu kwe-Final Cut Pro. Isoftware ivumela ukunikezela, ukumodela, ukubaza, ukugqwayiza, kanye nokugqogqa kanye nokuhlelwa kwevidiyo. Isici sayo sokuhlela ividiyo sivumela ukuhlela okuyisisekelo njengokunqunywa kwevidiyo nokusikwa. Isoftware ivumela nokuhlanganiswa komsindo ukuhambisana nokuhlelwa kwevidiyo esezingeni eliphakeme.
Ekufundeni komsindo, kuvumela ukuklabha, ukuvumelanisa, kanye nokubukwa kwefomu. Ngaphandle kokuhlelwa kwevidiyo okuyisisekelo, isekela izici zokuhlelwa kwevidiyo eziyinkimbinkimbi njengokufihla ividiyo nokuhlelwa kwemibala. Isoftware isetshenziswa ngabathuthukisi begeyimu, abaculi bezithombe, abakhi bemidwebo. Ungakwazi ukulawula isivinini, engeza ukuhwebelana, izihlungi, namafreyimu angukhiye.
Isihleli sevidiyo siza sigcwele amathuluzi nezici ezinjengokubuka kuqala kwe-Live, ifomu le-luma wave, i-chroma vectorscope, nokuboniswa kwe-histogram. Ungasebenza ngasikhathi sinye kumavidiyo ahlukene angama-32 njengoba kuza nezikhala ezingama-32. Hhayi ividiyo kuphela kepha nezithombe, umsindo, imaski, nemiphumela. Le ndlela yeFinal Cut Pro iyiTrouville njengoba kumahhala ukuyisebenzisa futhi Inikeza abahleli bevidiyo bamahhala abangasetshenziswa kakhulu.
Kumahhala, ukusetshenziswa kwempilo yonke
Isibonisi esisebenziseka kalula
Hhayi ikakhulukazi ukuhlela ividiyo
Le ndlela ye-Final Cut Pro iyatholakala ngamawindi. Lo mhleli wevidiyo, ngazo zonke izindlela, ungumncintiswano onamandla wokusika kokugcina futhi nakwezinye izindlela zokugcina ze-Final Cut Pro. Umhleli uvumela ukuhlela okuyisisekelo kwevidiyo futhi ngejubane elincomekayo elisheshayo. Kufaka imiphumela engaphezu kwengu-50 nezinguquko ukuqinisekisa ukuhlelwa kokudala.
Ukunikeza ukuncintisana okuqinile kusoftware ye-premium kuvumela Ukuhlela nokuthumela kwamafayela e-3D namafayela evidiyo angama-360. Isekela inani elikhulu lamafomethi weFayela futhi inamathuluzi womsindo akhelwe ngaphakathi ukuletha amavidiyo anomsindo wekhwalithi ephezulu. I-interface yayo yomsebenzisi ilula futhi ivumela ukuhlela nokungenisa amavidiyo ngokuhudula bese uphonsa.
Isoftware yokuhlela ividiyo ivumela ukwabelana nokusha kuzici ze-DVD ukunciphisa ukwabelana. Ungashuna kahle umbala, isivinini sokulawula, futhi wenze ukuzinza kwevidiyo. Ungakha futhi amavidiyo avulekile futhi uthumele amavidiyo ngesinqumo esiphezulu esivela ku-4k kuye ku-720p nokuningi. Uhlobo lwayo lwamahhala luyatholakala ekusetshenzisweni okungeyona i-Professional, ukusetshenziswa kwabathengi. Ukusetshenziswa kobuchwepheshe, ungathenga uhlobo olukhokhelwayo.
Ukuhlelwa kwevidiyo okulula futhi okulula
Inani elikhulu lezinguquko
Inguqulo yamahhala yokusetshenziswa komuntu siqu
39.95 $, inkokhelo yesikhathi esisodwa
Le ndlela ye-Final Cut Pro ihlukile kwezinye njengoba lokhu kungeyona isoftware kepha kuyithuluzi lokuhlela ividiyo eliku-inthanethi. Njengokunye kwethuluzi lokuhlela ividiyo eliyi-premium, lokhu kungahle kusilele ngemuva kancane kochwepheshe. Kepha ukusetshenziswa kwansuku zonke, kusebenza kahle kakhulu.
Ukuhlelwa kwevidiyo okuyisisekelo njengokuhlangana, ukucindezela, ukukhulisa usayizi, umbukiso wesilayidi, njll. Kungenziwa ku-inthanethi kuleli sayithi. Uma uvakashela isayithi uthola amanye amathuluzi ayisisekelo akhonjisiwe ekhasini lokuqala. Ngokuqhubeka nokuhlola, ungathola ezinye izici ezingeziwe ezinganikeza amavidiyo alungile we-Youtube alungile.
Noma kungekho zinhlelo zokusebenza zamakhasimende noma isoftware enikezwa yileli sayithi. Usengakwazi ukufaka uhlelo lwayo lokusebenza kumawindi 10. Ukufaka, vula ividiyo kumngcele we-Microsoft. Ufike kuma-ellipsis amile nakuzinhlelo zokusebenza. Kuzinhlelo zokusebenza chofoza ku- 'ukufaka leli sayithi njengohlelo lokusebenza' bese uqhafaza ukufaka ebhokisini lengxoxo lezo zinhlelo zokusebenza. Izolandwa futhi ingaqhutshwa kusukela ekuqaleni. Ukwenza lokhu kuzokwenza ukufinyelela kuzici namathuluzi kube lula.
Ukuhlelwa kwevidiyo okuyisisekelo kuyatholakala
Ayikho isoftware ezinikele yamawindi
8. IDaVinci Resolve
Enye isoftware yokuhlela ividiyo ethandwayo isetshenziselwa ukuhlela ividiyo ngobungcweti. Yize ekusetshenzisweni kochwepheshe inokuklanywa okulula nokusheshayo. Kungaba abasebenzisi abasha noma ochwepheshe abadala lolu hlelo lokusebenza Lunikeza izici nekhwalithi yakho kokubili. Isoftware Ifakazela amathuluzi amaningi adinga ukuhlelwa endaweni eyodwa, nokungenjalo ngesinye isoftware esithandwayo.
Ukuhlanganiswa kokulungiswa kombala, imiphumela yokubukwayo, nemidwebo yokunyakaza kwisoftware eyodwa kuvimbela ukwehla kwekhwalithi yevidiyo. Amathuluzi akule software asetshenziselwa ukuhlelwa kumamuvi. Lawa mathuluzi asetshenziswa ngabachwepheshe bemibala, abahleli, nomculi we-VFX.
Enguqulweni yayo yakamuva, uthola i-Wide Gamut HDR, igundane nokuhlelwa okususelwa kukhibhodi. Injini yomsindo esebenza kahle yengezwa ekwazi ukuxhasa imisindo engama-2000 kusistimu. Inenani elikhulu lokushintshwa, imiphumela yevidiyo, isihloko, ama-s, njll. Le ndlela ehlukile ye-Final Cut Pro inomklamo omuhle futhi itholakala njengenguqulo yamahhala nekhokhelwayo yakho kokubili.
Inguqulo yamahhala enezici ezidingekayo ezitholakalayo
Amathuluzi nezici ezingeziwe
Isipiliyoni somsebenzisi omubi
IDaVinci Resolve Studio 17 e25,900
Lokhu okunye okusika i-Final Cut Pro kuyisinqumo esihle njengoba ihlanganisa bobabili ubunzima nge-Final Cut Pro. Okokuqala, lena isoftware yokuhlela ividiyo eyakhiwe ngo-2004 nge-Windows eyenza ukuthi ihambisane namadivayisi adinga usizo. Okwesibili, le software iyi-software yokuhlela ividiyo evulekile okusho ukuthi imahhala ukulanda nokusebenzisa.
Le software empeleni iyithuluzi lokuhlela ividiyo elihamba phambili. Ixhasa ukusekelwa okuhlukahlukene kwefomethi yemidiya, umsindo, ividiyo nama-codec. Isoftware ayidingi ukungenisa yingakho ivumela ukuhlelwa kwendabuko ngama-timeline amafomethi amaningi, izinqumo, nezinga lohlaka.
Ivumela isikrini, ikhamera yewebhu, nokuthwebula umsindo futhi isekela ukulungiswa okungu-4k okuphezulu. Ine-interface elula, ehlelekile, futhi esebenziseka kalula. Ithola izibuyekezo ezijwayelekile. Inokushintshwa, imiphumela yevidiyo, nokuhlelwa komsindo okuyisisekelo. Ukuba isoftware yomthombo ovulekile imahhala ngakho-ke ilungele abaqalayo ukuzama. Ngisho Nabachwepheshe bayayisebenzisa basebenzise amakhono abo athuthukile ukuthola okungcono kakhulu kule software futhi abadumali.
Umthombo ovulekile futhi ukhululekile ukuwusebenzisa
Isekela amafomethi amaningi
Yenzelwe amawindi lokhu kungenye indlela ekhethwayo njengenye indlela ye-Final Cut Pro. Yaqala ukwenziwa ngo-2005 futhi isetshenziswa kabanzi kusukela lapho. Isoftware iletha ukuhlelwa kwekhwalithi kumavidiyo akho. Isoftware isekela amafomethi amaningi wevidiyo nokuhlela, ukungenisa, ukuthumela kuwo. Ibuye ivumele ukuhlelwa kwe-3D.Ukubeka ngokumelene nezinye izindlela ze-Final Cut Pro nesoftware uqobo, inenani elikhulu lamathuluzi.
It has NEWBlue Video filters, ProDAD video effects, and VST audio plug-ins for audio enhancement. Ngokucubungula ngasikhathi sinye kwamavidiyo we-4k, ukulungiswa kombala futhi lezi zihlungi zithola okungcono kakhulu kwisoftware. Isoftware inohlelo oluthuthukisiwe lweMync oluhlela ukuhlela, ukwaba iziqeshana, namafayela emidiya.
Njengenye indlela ye-Final Cut Pro, isekela i-High Dynamic Range kwividiyo esebenziseka kalula yokwenza ibe lula futhi isebenze kahle. I-EDIUS idinga ukutshalwa kwemali kwesikhathi esisodwa nokusetshenziswa kwempilo yonke. Uma usuthengile uthola izibuyekezo zamahhala nezijwayelekile futhi uthola ilayisense engunaphakade uma uthenga futhi ungayisebenzisa impilo yakho yonke. Ungathola inguqulo yesivivinyo samahhala yezinsuku ezingama-30 ukuze uthole ulwazi lwesoftware bese uzinqumela yona.
Ukutshalwa kwemali kwesikhathi esisodwa.
Ilayisense yokusebenzisa impilo yonke
Uhlobo lwesilingo lwezinsuku ezingama-30 luyatholakala
Buka Kufakiwe 11 Wondershare Filmora
Le ngenye isoftware edumile yokuhlela ividiyo. Le software enamandla yokuhlela ividiyo ikuhlomisa ngamathuluzi amaningi wokwenza amavidiyo amangalisayo. Ine-design enembile evumela abasebenzisi ukuthi bazulazule ngesoftware kalula. Ithuluzi elihle labaqalayo ekuhlelweni kwevidiyo ngesixhumi esibonakalayo esisebenziseka kalula.
Ungahlela amavidiyo anokulungiswa okuphezulu kuze kufike ekuxazululeni okungu-4k. Ixhasa amafomethi amaningi wevidiyo afana ne-MP4, AVI, FLV, MKV, njll kanye namafomethi alalelwayo afana ne-MP3, WAV, M4A, njll. Ezithombeni futhi isekela inani elikhulu lamafomethi. Inezici ezibalulekile njengokulawulwa kwejubane, ukusikwa kwevidiyo, ukwahlukana, ukushintshanisa, ukuhlanganisa nokulima, ukuhlehlisa, isithombe esithombeni, nokulandelela ukunyakaza.
Lokhu okunye kwe-Final Cut Pro kuvumela ukwabelana okulula kwamavidiyo ahleliwe. Uhlelo lokusebenza luvumela ukulayishwa kuma-social media, ukushisa ku-DVD, nokuhambisana ne-iOS ne-Android. Le Software itholakala mahhala kumawindi. Ungakhetha uhlobo olukhokhelwe ukuze uthole izici ezingeziwe njengezibuyekezo zamahhala, akukho watermark enezici ezingeziwe.
Inguqulo yamahhala iyatholakala.
Izici eziyisisekelo nezibalulekile ziyatholakala ngenguqulo yamahhala.
Inani elikhulu lamafomethi wefayela ayasekelwa.
Akuvumeli ukuhlela okuningi ngasikhathi sinye.
Uhlobo olukhokhelwe ku- $ 7.99 / ngenyanga
Le ndlela ye-Final Cut Pro igcwele izinto eziningi ezisetshenziswa kakhulu ngabadwebi bevidiyo endaweni eyodwa. Kuyisoftware evumelana namathuluzi we-tilting ne-3D kanye nokuhlelwa kwevidiyo. Isoftware inekhithi yamathuluzi okubuka ebanzi ebanzi. Le software isebenzisa obunye ubuchwepheshe obaziwa kakhulu emhlabeni njengamathuluzi we-BorisFX's Pro tilting.
Isoftware ineqoqo lamathuluzi wokuhlela ividiyo ayisisekelo afana nekhophi, ukusika, nocezu, njll. Kanye namathuluzi ayisisekelo ineqoqo layo elihlukile lamathuluzi, amathuluzi alalelwayo amahle kakhulu, namathuluzi wokugqwayiza. Isici esenza kube okungcono kakhulu kwe-Final Cut Pro okunye ukuthi sisekela amavidiyo wokuxazulula ama-8k. Futhi isivinini sayo sokukhipha esisheshayo nombala wephoyinti elintantayo elingu-32-bit.
Ihambisa Ukucubungula okusheshayo isebenzisa isistimu yayo esheshayo ye-GPU. Kunikezwe i-hardware edingekayo njenge-Intel GPU isoftware lapho isetshenziswa izoshesha futhi ibushelelezi. Ixhasa amafomethi wemidiya angaphezu kwesilinganiso futhi ilungele ukumodeliswa kwe-VFX ne-3D ngesici esinamandla sokubhala. Ibuye ibe ne-video stabilizer kanye nokhiye we-chrome ukuyenza ibengcono kunalokho ekuyiyo vele.
Izici zekhwalithi ezinhle kakhulu namathuluzi
Futhi isoftware enhle ye-VFX
Kuhle kakhulu ukusetshenziswa kochwepheshe
Kudingeka i-hardware enamandla
Idemo yamahhala enezici ezinomkhawulo
Qedela isoftware yesikhathi esisodwa ukuthenga ngo- $ 209.40
13. I-Autodesk Intuthu
Le software ehlukile ye-Final Cut Pro Inikeza ukuhlela okugxile emugqeni wesikhathi usebenzisa amathuluzi. Ukuhlelwa okugxile emugqeni wesikhathi kuvumela ukuphelelisa ividiyo ngemininingwane emihle kakhulu ngaso sonke isikhathi iwindi. Ivumela ukwakheka okususelwa kuma-node ukukuvumela ukuthi uhlele kalula ngaphandle kokuphuma ekubukweni komugqa wesikhathi.
Ungangenisa futhi udale i-3D geometry nemibhalo, engeza izihloko ze-3D kuvidiyo yakho usebenzisa le software. Ukusika okunamandla kukunika ukulawula isikhathi nesivinini. Isoftware inokusekelwa kwefomethi yemidiya emaphakathi. Le ndlela ye-Final Cut Pro ine-demerit yokuthi itholakalela i-Mac ne-Linux kuphela.
Isoftware inezidingo ezijwayelekile zehadiwe futhi isebenza kahle nge-4GB RAM ne-Intel core audio. Le software iza nenani elikhulu lemiphumela yevidiyo ezosetshenziswa namathuluzi wokuthuthukisa ividiyo. Uhlobo lwayo lwesivivinyo samahhala luyatholakala kanye nenguqulo ekhokhelwayo. Kungcono ukusetshenziswa kochwepheshe hhayi kwabaqalayo njengoba amathuluzi wokuhlela eyinkimbinkimbi.
Izici ezisezingeni eliphakeme
Okwe-Mac ne-Linux kuphela
Isixhumi esibonakalayo somsebenzisi
Inguqulo yamahhala yesilingo
Ukulanda okugcwele ngo- $ 1,620
Le software evulekile yomthombo wevidiyo kulolu hlu. Inezici okufanele zisetshenziswe njenge-Final Cut Pro ehlukile. Itholakala nge-Mac, Linux, namawindi. Kungumhleli wevidiyo onqamula ipulatifomu. Isoftware kulula ukuyisebenzisa futhi abantu bayifunda ngokushesha njengoba ine-interface yomsebenzisi elula.
Ungenza konke ukuhlela okuyisisekelo kwevidiyo kule software njengokucheba, ukusika, nokunquma. Ngokuhambisana nezisekelo, ungaphila izinto eziletha impilo kumavidiyo. Isoftware ivumela ukufakwa okuningi kwe-watermark, ividiyo, amathrekhi alalelwayo, njll. Ungalungisa ukulungiswa kombala bese ungeza imiphumela yevidiyo ngenkathi usebenzisa le software.
Ungabona ngeso lengqondo ama-audi njengama-waveforms futhi uwafake kumavidiyo akho. Ngokuhambisana nemiphumela ungangeza izihloko, unikeze izihloko ze-3D nemiphumela. Ine-interface elula yokusebenzisa futhi ivumela ukungeza amavidiyo ukuthi ahlelwe ngokuhudula bese uphonsa. Ungalawula isikhathi, wenze isivinini sevidiyo sisheshe noma sihambe kancane, usebenzisane ngesibonisi esisebenza kahle.
Umthombo ovulekile futhi mahhala
Zonke izici eziyisisekelo ziyatholakala
Izici njengalezo zabahleli bamavidiyo we-premium.
Asikho isici esingeziwe
15. Izinto zokukhanyisa
Owokugcina ohlwini lwezinye izindlela ze-Final Cut Pro, le software isaphinda isetshenziselwe kabanzi i-Professional Proposes. Isetshenziselwe ama-movie amaningi afana neWolf of wall street, i-Pulp Fiction, inkulumo kaKing, njll. Isoftware yango-2020 iza iphakethe elihlanganisa konke umuntu angadinga ukudala, ukuhlela amavidiyo nganoma iyiphi injongo.
Inomklamo olula ophelelisiwe eminyakeni eminingi yempendulo yomsebenzisi nokwenza kahle. Ivumela ukuhlela umugqa wesikhathi okungenamsebenzi nokusika nokuhlela amavidiyo wokuxazulula ama-4k. Ungathumela ngqo ku-youtube noma ku-Vimeo ngaphandle kwekhwalithi yokuthembisa ekuxazululeni okungu-4k.
Ixhasa inani elikhulu lamafomethi wemidiya futhi ivumela ukunemba kwe-32bit GPU. Ekulandeni uthola ilayisense yamahhala yezinsuku eziyi-7 yokuyisebenzisa njengenguqulo yesilingo. Uma uyithola ilungile enye i-Final Cut Pro, ungathenga nokuhluka okusha ngokusebenza kwesikhathi okuhlukile. Ukuthuthukela ku-Pro, kufanele ubhalise futhi uzothola ukufinyelela kuzici ezisetshenziselwa ukwenza, ukuhlela ama-movie.
Idume futhi kulula ukuyisebenzisa
Isivivinyo samahhala sezinsuku ezingu-7 siyatholakala
$ 24.99 / ngenyanga
IFinal Cut Pro ngokungangabazeki iyisoftware yokuhlela ividiyo enhle kakhulu, yingakho abasebenzisi bewindi bedinga enye indlela yale software. Kepha inesabelo sayo sokwehluleka futhi akukho lutho olungcono kakhulu oluphuma mahhala, uma kwenzeka iFinal Cut Pro, engabizi!Ngakho-ke lezi ezinye izindlela ze-Final Cut Pro yizo ezingabizi, kokunye zikhululeke nezici namathuluzi asondele kakhulu. Akudingekile ukuthenga iMac ngokwenza ukuhlela kweProfessional noma kwekhwalithi ephezulu. Konke okudingayo kungenye yale software ongayikhokhela futhi ngamakhono weqiniso.
Njengoba kunikezwe ukwakheka kwabo okusebenziseka kalula kungenzeka ukuthi ungadingi noma yiliphi ikhono elidingekayo. Le software inikezela ubuciko ngaphandle kokukhathazeka ngekhwalithi noma ngemali. Qalisa futhi mhlawumbe uzame konke! (okungenani ezikhululekile)
U. Ingabe ikhona inguqulo yamawindows ye-Final Cut Pro?
Iminyaka.Njengamanje, Cha. Kepha uma kunesidingo nokuthandwa kwesoftware umuntu angakhishwa ngokuzayo. Ngaphandle kwalokho, kunezinye izindlela eziningi njengamapeni abhalwe ngezansi aletha imiphumela ecishe ifane yekhwalithi. Ungazama isoftware yokuhlela ethandwayo efana ne-Adobe noma i-Corel ukuthola isipiliyoni esifana ne-Final Cut Pro.
U. Ingabe ikhona inguqulo yamahhala ye-Final Cut Pro?
Iminyaka.Ayikho inguqulo yamahhala ye-Final Cut Pro kodwa ungayisebenzisa mahhala izinsuku ezingama-90 njengenguqulo yesilingo. Ungathola ulwazi oluphelele nombono ofanele mayelana nesoftware ngaphambi kokuthi uthathe isinqumo sokuyithenga. Isivivinyo sezinsuku ezingama-90 sanele ngokwanele ukuthi unganquma ukuthi sikufanele yini noma unakho konke ongakwenza kusukela enguqulweni yamahhala.
U. Ngingayithola kanjani i-Final Cut Pro yamawindi mahhala?
Iminyaka.Impendulo elula nephelele yalo mbuzo, awukwazi. Kodwa akumele udumazeke njengoba ungakwazanga ngisho nokukuthola mahhala ku-Mac. Kepha ungathola isoftware yokuhlela ividiyo yamahhala engaletha imiphumela emihle kakhulu ongayakha ngobuhlakani futhi ideskithophu yakho ingahlangana ne-hardware yayo. Enye ye-software ehamba phambili mahhala, enye indlela ye-Final Cut Pro yamawindows yi-Openshot.
Izindawo ezihamba phambili zeGarageband